War - Waa maxay sheyga maaskaro caafimaadku ka samaysan yahay?
Maado noocee ah ayaa laga sameeyay maaskaro caafimaad?
Maaskarada caafimaadku guud ahaan waa qaab saddex-lakab ah (oo aan tolmo lahayn), kuwaas oo ka samaysan laba lakab oo dun tol ah oo aan tolmo lahayn loo adeegsaday oo loogu talagalay daryeelka caafimaadka iyo caafimaadka, hal lakabna lagu daro dhexda labada lakab, oo la sameeyay ee xalalka lagu buufiyey dhar aan tolmo lahayn lehna in ka badan 99,999% sifeyn iyo bakteeriyada lidka ku ah alxanka ultrasonic
Seddex lakab oo u kala baxa maaskaro caafimaad: lakabka sare oo leh naqshadeynta dhibcaha ka hortagga (marada aan tolmo lahayn ee miiqan) + sifeynta lakabka dhexe (dhalaalida dharbaaxo aan dhar lahayn) + nuugista qoyaanka lakabka gudaha (maro aan tolmo lahayn)
Fiiro gaar ah: dhalaalay afuuftay dhar aan-tolmo lahayn waa guud ahaan 20 garaam
Spunbonded non-toven dhar (lakabka sare): dharka aan tolmo lahayn waa dhar aan tolmo lahayn, kaas oo ka kooban fiilooyin, laxiriira dharka dharka.
Faa'iidooyinka: hawo-siinta, sifeynta, nuugista biyaha, biyuhu, maareynta wanaagsan, jilicsan, iftiinka
Faa'iido darrooyinka: ma nadiifin karo
Xalka buufiyo dhar aan tolmo lahayn (lakabka dhexe): maaddadani waa mabda'a ah in la faquuqo bakteeriyada. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa polypropylene, taas oo ah nooc ka mid ah dharka fiber-ka elektaroonigga ah ee heer sare ah, kaas oo qabsan kara boodh (dhibcaha ay ku jiraan fayraska oof-wareenka ayaa lagu xallin doonaa dusha sare ee dharka aan-tolnimada lahayn ka dib markay u dhow yihiin dhalaalka aan la afuufin -labbo maro ah, oo aan la dhex gelin karin).
Spunbonded non-toven dhar (gudaha): maro aan tolmo lahayn ayaa la xidhiidha dharka dharka, taas oo ah, dhar aan tolmo lahayn, oo ka kooban fiilooyin.